Nhau - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Imba > Nhau
Nei iyo anti-yekunyepedzera shinda rakarukwa chitaridzi kuti riudzirwe?
Vamwe vatengi vanofunga kuti kune zvakare kukiya kwakakomberedza mamaki akarukwa. Saizvozvo, uku ndiko kunzwisiswa kusiri iko. Chinyorwa chakarukwa chakatenderedzwa, inova nzira yekuwedzera kwekuwedzera.
Chii chinonzi jacquard ribhoni jacquard ribhoni maitiro sumo
Jacquard mushure mekuonekwa kweribhoni-mativi matatu akasarudzika, jacquard patani yakasimba yekukwesana, haina kumbobvira yakashanduka.Brand jacquard, logo inooneka zvakajeka, yakajeka ruvara, giredhi rakanyanya, haigone kuwedzera chete kuwedzera kuwedzerwa kwezvigadzirwa, Inogona zvakare kusimudzi......
Nzira yekusiyanisa sei mhando yewebhu?
Kune akawanda marudzi ewebhu muindasitiri yewebhu, ayo anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana dzeindasitiri dzakadai sembatya, kudhinda chiratidzo, kushongedzwa kweshangu, mukwende, indasitiri, kurima, zvekushandisa muchiuto, uye kutakurwa.
Yokudhaya maitiro ehembe dzekupfeka
heano maitiro maviri akakosha ekupenda marara emachira. Imwe ndiyo yekudyara yakanyanya kushandiswa (yakajairwa kudhaya), iyo inonyanya kurapa machira emachira mune mhinduro yemakemikari dhayi. Imwe nzira ndeyekushandisa pendi, iyo inogadzirwa kuita zvidiki zvisinganyungudiki zvine mavara kuti zvite......
Inopisa kuzivikanwa nzira yezvinowanzo shandiswa webhu zvinhu:
Ungatsanangure sei kukasira kwemavara kwewebhu? Chiyero cheyedzo yekukasira kwemavara kwewebhu